Faransiiska oo adkeeyay qaadashada dhalashada | Somaliska
Dowlada Faransiiska ayaa maanta dhaqan galisay sharci cusub oo aad u adkeynaya qaadashada baasaboorka weyn. Sharcigaan ayaa qasab ka dhigaya in qofku uu imtixaan u galo luuqada iyo dhaqanka Faransiiska.
Sharcigaan oo uu soo diyaariyay wasiirka arimaha gudaha ee Faransiiska Claude Guéant oo lagu eedeeyo in uu necebyahay soo galootiga ayaa qasab ka dhigaya in qofku uu barto dhaqanka iyo taariikhda Faransiiska, luuqada iyo in ay soo galootigu saxiixaan qaraar cusub oo mamnuucaya in aysan wadankale magaciisa sheegan karin inta ay faransiiska joogaan. Arintaas ayaa qaasatan jahwareer abuurtay maadaama Faransiisku ogolyahay in qofku uu labo baasaboor qaato.
Wasiirka arimaha gudaha ayaa ku celceliyay in qofka noqonaya Faransiis looga baahanyahay in uu aqbalo cilmaaniyada ka jirta wadankaas isla markaana uu ka soo tago dhamaan waxyaabaha lidiga ku ah demokraadiyada Faransiiska. Hadalkiisa ayaa lagu micneeyahay in uu ku durayo Muslimiinta oo u badan dadka cusub ee dhalashada qaata.
Wasiirka ayaa sheegay soo galootiga aan ku dhex milmin dhaqanka Faransiiska in loo diidi doono dhalashada. Bilowgii sanadkii 2011 ayuu si qaas ah ugu diiday nin Aljeeriyaan ah baasaboorka ka dib markii lagu eedeeyay in uu xaaskiisa si xun ula dhaqmo. Waxay kale oo ku guda jiraan sharci dhalashada kala noqonaya ragga dhowrka xaas guursada.
Dowlada uu hogaamiya Sarkozy ayaa lagu eedeeyay in ay u liicayaan dhinaca midigta iyaga oo ku dhaqmaya siyaasada xisbiyada cunsuriyiinta ah si ay ugu guuleystaan doorashada sanadka soo socda. Intii uu talada hayay ayuu Sarkozy mamnuucay niqaabka Muslimiinta iyo xijaabka in iskuulada lagu tago. Waxa kale oo uu dhowr jeer abuuray dood ku saabsan Muslimiinta isaga oo la sheegay in uu cod ku raadsanayo nacaybka Muslimiinta.
Abu Marwo says:
Nacaybkaa waa mid ku baahsan Guud ahaan USA, Canada , EU, welibana waa Awaamiir hadda Yurubta aan joogno gaar ahaan Iskaan-deneefiyaanka ku soo foolleh Alle ayaan Magrigooda ka magan galaynaa.
wadankooda iyagaa iska leh waxey rabaan ayey kasamey karaan